Sababaha loo Isticmaalayo Muujinta Kaartoonka
Milkiileyaal badan oo dukaamada tafaariiqda ah iyo dukaamada tafaariiqda ah ayaa adeegsada tusaalooyin alwaax ah si ay u soo bandhigaan wax soo saarkooda, laakiin isticmaalka kaararka boodhadhka baakadaha ayaa sidoo kale caan ku noqday. Waxaad ogaan doontaa istaandarka iyo kartoonada la istcimaalayo inta lagu jiro bandhigyada ganacsiga iyo xitaa bannaanka dukaamo kala duwan oo ah barta wax lagu iibsado (POP) ...
Khaanadaha Qaaliga ah ee Hadiyadaha Qalafsan
Waa maxay Box adag? Sanduuqyada adag ayaa ka mid ah qaybaha loogu raadinta badan yahay ee sanduuqyada baakadaha. Ku dhowaad dhammaan noocyada raaxada waxay u adeegsadaan baakadaha adag si ay u helaan maqaalladooda qaaliga ah ee jilicsan. Xirxirida sanduuqa adag waxaa loo yaqaanaa adkeysiga, isku halaynta, xoogga, iyo qaabdhismeedka adag. Kuwani dielectrics ...
Waxyaabaha Xumbo EVA: Hagaha ugu fiican ee qeexidda
Waxaad kudhowaad kaheli kartaa walxaha xumbada EVA meelkasta! Badanaa waxaa bixiya bixiyeyaasha xumbada loo yaqaan 'EVA foam' sida go'yaasha xumbada EVA, duubista xumbada EVA, gogosha xumbada xumbada EVA, cajaladaha xumbada EVA iyo wixii la mid ah. Laakiin dhab ahaantii ma ogtahay maadadan xumbada? Halkan waxaan ku tusineynaa habka aad si fiican ugu ogaan karto walxaha xumbada loo yaqaan 'EVA foam'. Kaliya ...